ကိုကာလီမြို့ပြမြူနီစီပယ် | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
လိုင်း 805 အားဖြင့် Kandira စင်တာကိုတိုက်ရိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
လိုင်း 805 အားဖြင့် Kandira စင်တာကိုတိုက်ရိုက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး; Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ယာဉ်အသွားအလာ ဦး စီးဌာန၏ညှိနှိုင်းမှုအောက်တွင် TransportationPark A.Ş. 805 လိုင်း၏လမ်းကြောင်းသည်ကန်ဒီရာ၏ဗဟိုအထိကီလိုမီတာ 15 ကိုတိုးချဲ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည် [ပို ... ]
Salim Dervişoğluလမ်းပေါ်ရှိ Mobile Stops တွင်ခုံတန်းရှည်များကိုနေရာချထားသည်။ Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၊ အစိမ်းရောင်areasရိယာများ၊ ဥယျာဉ်၊ ဥယျာဉ်များနှင့်မြို့လယ်ခေါင်တွင်လိုအပ်သောမြို့ပြသုံးပစ္စည်းများ [ပို ... ]
20 ကီလိုမီတာအထိAkçarayရထားလမ်းအရှည်၊ Kocaeli Metropolitan မြူနီစီပယ်ကAkçarayရထားလမ်းကိုဘတ်စ်ကားဂိတ်နှင့် Sekapark လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းဝန်းကျင်ကိုသဲသောင်ပြင်လမ်းအထိတိုးချဲ့ခဲ့တယ်။ 11 နိုဝင်ဘာလိုင်းအသစ်ပြီးစီးသည် [ပို ... ]
Akçaray၏လိုင်းအသစ်သည် City Hospital သို့ရောက်လိမ့်မည်။ မြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Tahir Büyükakın၏ဥက္ကchair္ဌတာဝန်အောက်တွင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် tram မျဉ်းကိုပါလီမန်ရှိစီးတီးဆေးရုံသို့တိုးချဲ့ရန်စီမံကိန်းကို Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏ဇုန်ခွဲခြားရေးအစီအစဉ်တွင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ [ပို ... ]
Salim Dervişoğluရှိယာဉ်အသွားအလာကိုမိုဘိုင်းဖုန်းကရပ်တန့်ပေးသည်။ ၎င်းသည် Kocaeli's Karamürsel, Gölcükနှင့်Başiskeleခရိုင်များသို့အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အသုံးပြုသော D-100 အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့်အစားထိုးရန် Izmit Salim Dervişoğlu Caddesi တွင်တည်ရှိသည်။ [ပို ... ]
Sabiha Gökçen'e Kocaelikart Loading Point; Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၊ TransportationPark ၏တွဲဖက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် A.Ş. နိုင်ငံသားများ Sabiha Gokcen လေဆိပ်တင်ပို့သည့်စနစ်သည်နိုင်ငံသားများ၏ ၀ ယ်လိုအားနှင့်အညီခရီးသည်များကိုတင်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကြာသပတေးနေ့မှနိုဝင်ဘာလအထိ7[ပို ... ]
Martyr ရဲတပ်ဖွဲ့ Serdar Gokbayrak Overpass Repair
Kocaeli၊ Kocaeli Izmit ရှိ Umuttepe ကျောင်းပရဝုဏ် Gate B ရှေ့တွင် Martyr Police Serdar Gökbayrakတံတား [ပို ... ]
TransportationPark သည်TÜRSİDကိုတည်ခင်း; ည့်ခံသည်။ မီးရထားနှင့်လိုင်းကော်မရှင်နာ၏မီးရထားနှင့်လိုင်စင်ကော်မရှင်နာ၏ (TÜRSİD) ၏အစည်းအဝေးကိုကိုဆယ်လ်လီမြို့ပြမြူနီစီပယ်၏လက်အောက်ခံ Ulasim Park A.Ş. ကကျင်းပခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်များအနေဖြင့်တူရကီရဲ့စုစုပေါင်း 15 [ပို ... ]
Overpass လေ့လာမှုကြောင့် Umuttepe Road သို့ယာယီလမ်းကြောင်း
Üstgeçit Çalışması Nedeniyle Umuttepe Yoluna Geçici Güzergâh; Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak yaya üst geçidinde çalışmalar yapılacak. Çalışma nedeniyle toplu taşıma araçları için [ပို ... ]
Line 200 ကိုသုံးသောသူတို့အား ospel ၀ ံဂေလိတရားကိုဟောပါ။ အစ္စတန်ဘူလ်များအတွက် Kocaelikart စက်
Hat 200 Kullananlara Müjde..! İstanbul’a Kocaelikart Cihazı; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından gelen yoğun taleplere kayıtsız kalmayarak İstanbul’un ilçesi Kartal’da (İETT peronlar bölgesi) Kocaelikart dolum cihazını hizmete sundu. İstanbul’dan Kocaeli’ye [ပို ... ]
Kartepe Hippodrome လမ်းပြုပြင်မွမ်းမံသည်
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kartepe Kent Meydanı’nı Sarı Meşe Mahallesi Bağdat Caddesi’ne bağlayan Hipodrom Caddesi’nde yenileme çalışması yapılıyor. Çalışmaların yoğun bir [ပို ... ]
Kartepe ထိပ်သီးအစည်းအဝေး Asphalted မှအခြားရွေးချယ်စရာလမ်း
ကဒ်တိတ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေး Asphalted မှအခြားရွေးချယ်စရာလမ်း, Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာသည်အဝေးပြေးလမ်းမများနှင့်လမ်းများကိုပြုပြင်ခြင်းနှင့်နိုင်ငံသားများ၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ပေးပြီး၊ Pazarçayırıခရိုင်မှ Kartepe [ပို ... ]